Ethereum Chii uye sei kutenga maEthers? Zvese nezve blockchain | Gadget nhau
Ethereum Chii uye sei kutenga maEthers?
Etherum haisi nyore sarudzo kune Bitcoin pachayo, asi asi chikuva chinotora mukana we blockchain tekinoroji (zvakare inoshandiswa neBitcoin) kwete chete yekupa imwe nzira yekubhadhara zvakafanana neBitcoin, Ether, asi iri software yekuvandudza chikuva iyo inobatsira mukugadzirwa kweiyo cryptocurrency masisitimu ayo anogovera cheni yemabhuroko, anozivikanwa zviri nani se blockchain, uko marekodhi akaiswa asingakwanise kugadziriswa kana kuchinjwa chero nguva.
Asi kana zvinokufadza iwe kuziva Kana Ethereum iri imwe nzira yeBitcon, mhinduro ndeyekuti kwete. Imwe nzira yeBitcoin iyo Ethereum inotipa inonzi Ether, chikuva kunze kweiyo Ethereum chirongwa chatinokuudza zvese pazasi kuti iwe uzive mashandiro azvo uye sei kutenga Ethereum.
Kana iwe uchida kutenga Ethereum izvozvi, tora $ 10 YEMAHARA pakutenga kwako nekudzvanya apa
1 Chii chinonzi Ethereum?
2 Chii chinonzi Ether?
3 Ndiani akasika Ethereum?
4 Imwe nzira yeBitcoin
5 Nzira yekutenga Ethereum?
6 Chii chinonzi blockchain?
7 Zvibvumirano zvine hungwaru
8 Iko kune cryptocurrency bubble?
Sezvandambotaura pamusoro apa, Ethereum chirongwa chinobatanidza mari yedhijitari, Ether, seBitcoin, asi inotora mukana wezviitiko izvo blockchain inotipa, isingachinjiki rekodhi uye kuti kubvira pakazvarwa Ethereum yakanangiswa mukugadzirwa kwezvibvumirano zvakangwara. Zvibvumirano zvakangwara, sekutonga kwese, zvinosanganisira mashandiro emari, vanoita nenzira yakajeka kune vese mapato uye mashandiro avo akafanana neepurogiramu dzemakodhi Kana ivo vakaita izvozvo. Ndokunge, kana izvi zvikaitika, iwe unofanirwa kuita izvi imwe hongu kana hongu.
Tora $ 10 YEMAHARA kutenga ETH nekudzvanya pano
Ruzivo urwu rwese runoratidzwa mu blockchain, chinyorwa chisingachinjiki uko mashandiro ese anoratidzwa, kungave kuri kutengeswa kana kutengwa kwemari, zvibvumirano zvine hungwaru ... Ruzivo rwakachengetwa mupuratifomu blockchain runowanikwa kune wese munhu uye runowanikwa pane ese makomputa anoumba iyo Ethereum network. Iko kushanda kweBitcoins blockchain kwakangofanana, asi chete data rekutengesa rakanyorwa mariri, nekuti mikana inopihwa neiyi tekinoroji haina kuwedzerwa.
Chii chinonzi Ether?
Iyo Ethereum chikuva haisi mari pachayo. Iyo Ether ndiyo mari yeiyo Ethereum chikuva, uye iyo yatinogona kubhadhara kune vanhu zvinhu kana masevhisi. Ether ndeimwe yemakristudigital anowanikwa mumusika akaunzwa kukwikwidza neBitcoins, asi kusiyana neyekupedzisira, Ether inosanganisirwa mukati mepuratifomu inoshandisa zvizere blockchains, inonyatso kuzivikanwa se blockchain.
Ether, kungofanana neBitcoin haina kudzorwa nechero mari yemuviri, saka kukosha kwayo kana mutengo hauna kubatana nemasheya, zvivakwa kana mari. Iko kukosha kweEther kunoonekwa mumusika wakavhurika zvinoenderana nekutenga nekutengesa mashandiro ayo aripo panguva iyoyo, saka mutengo wawo unozoshanduka munguva chaiyo.
Unoda here 10 $ yemahara kana iwe ukatenga yako EtH? Zvakanaka tinya apa
Kunyange huwandu hweBitcoins hwakaganhurirwa kumamirioni makumi maviri nerimwe, Ether haina kuganhurirwa, saka mutengo wayo parizvino wakanyanya kagumi kuderera pane Bitcoins. Munguva yekutengesa kwekutanga kwakaitika pasati patanga Ethereum, mamirioni makumi maviri nemaviri Ether akagadzirwa kune vese vashandisi vakabatsira kuburikidza neKickstarter chikuva muchirongwa uye neiyo Ethereum hwaro, iyo, sezvatichaona, inotipa zvimwe zvakakosha. mashandiro uye akakosha. Pasi pemitemo yakanyorwa panguva yekutanga kutengesa muna 72, kuburitswa kwaEther kunogumira pamamirioni gumi nemasere pagore.
Iwe unoda kuisa mari muEthereum?
Dzvanya HERE kutenga maEthers
Ndiani akasika Ethereum?
Kusiyana neBitcoins, musiki weEthereum ane zita rekutanga uye rekupedzisira uye haavanze. Vitalik Buterin akatanga Ethereum kusimudzira mukupera kwa2014. Kuti uwane mari yekusimudzira chirongwa ichi, Vitalik akatsvaga mari yeruzhinji, achiwedzera anopfuura mamirioni gumi nemasere emadhora. Asati atarisana neprojekti yeEthereum, Vitalik ainyora mumabloggi akasiyana nezveBitcoins, ndipo paakatanga kugadzira sarudzo idzo tekinoroji inoshandisa Bitcoin yaigona kumupa uye kusvikira nguva iyoyo yaparara.
Imwe nzira yeBitcoin
Parizvino mumusika tinogona kuwana huwandu hwakawanda hwesarudzo kune Wemasimbaose Bitcoin, asi nekufamba kwenguva, nhamba iyi yaderedzwa zvakanyanya ichisiya Eteri, Litecoin uye Ripple senzira dzinoshandiswa zvakanyanya nevashandisi. Zvizhinji zvekubudirira kuri kuitwa naEther, ndezvekutenda kune ese Ethereum chirongwa chiri kumashure, nekuti dai chaingova imwe nzira, ingadai isina kukwanisa kuwana chikamu chechina chezviitiko zvinoitwa pasi rese nema cryptocurrencies, uko Bitcoin iri mambo ane angangoita 50% yemabasa.
Nzira yekutenga Ethereum?
Tevere isu ticha tsanangura sei kutenga Ethereum Kana pane kudaro, sei kutenga maEthers rinova zita reiyo cryptocurrency.
Kuva makwikwi akanangana kubva kuBitcoin, kugona kutora chikamu chakazara mukugadzirwa kweEthers tinoda komputa ine simba, internet kubatana uye software inodiwa kukwanisa kuve chikamu chenetiweki inoibatanidza, uye nekudaro wotanga kuwana rudzi urwu rwemari yedhijitari. Tichifunga nezvekuti Bitcoin yakatanga kushanda muna 2009, mashandisirwo nemaforogo akasiyana atinogona kuwana mumusika ari kushanda zvakazara, chimwe chinhu chatisingakwanise kutaura nezve Ethereum panguva ino.
Tinogona zvakare kusarudza iyo yekukurumidza track uye tenga Ethereum zvakananga mari iyi kuburikidza nemasevhisi akaita seCoinbase, sevhisi inotibvumidzawo isu kuchengetedza macryptocurrencies edu zvakachengeteka.
Kuti titsanangure zvakanakira izvo Ethereum inotipa, isu tinofanirwa kutaura nezve blockchain, iyo protocol inoshandiswa kugadzirisa ese marekodhi uye mashandiro anoitwa naEther, protocol imwechete inoshandiswa neBitcoins asi kwavakapa chinonyanya kukosha chinopa chengetedzo.
Blockchain ndeye registry uko iko kwese ruzivo rwakanangana necryptocurrencies rinochengetwa. Imwe neimwe cryptocurrency inoshandisa rakasiyana rejista. Ichi chinyorwa haigone kugadziriswa kana kushandurwa chero nguva uye inoonekwawo kune vese, kuti chero munhu agone kuiwana. Kudzivirirwa kubva kugadziridzo iyo blockchain inotipa ndiko kunaka kwayo kukuru sezvo ivo vachizoshandiswa kugadzira Smart Zvibvumirano.
Zvibvumirano zvine hungwaru
Kutenda kuna Ethereum unogona kuita zvibvumirano izvo kana mamiriro akanyorwa akasangana, anozosangana kana kana otomatiki pasina wechitatu munhu anofanira kupa go-mberi. Iyo yekugadzirisa mamiriro ezvinhu emamiriro ezvinhu kuti asangane anogona kusarudzwa kubva kunowanikwa kwakamisikidzwa nemapato ese. Iyo banking system ndeimwe yevanonyanya kufarira kugona kutora rudzi urwu rwechibvumirano chekushandura zvibvumirano uye vamwe nevatengi, nekuti zvaizodzivirira zvikanganiso zvevanhu zvinogona kuwedzera mukubvumidza kushanda kwakazvimiririra.
Fungidzira kuti iwe une portfolio yemasecurity mawakagadza mamiriro ekuti kana mutengo weimwe chengetedzo wasvika pamufananidzo X ivo vanozvitengesa otomatiki. Nekambani yeEthereum smart hapana munhu aifanira kupindira, Hapana munhu anofanirwa kuziva nezve mutengo nguva dzese kuti aenderere mberi nekutengesa zvikamu kana vasvika pane imwe kukosha.
Kunyangwe zvese zvichitaridzika uye zvakanaka kwazvo, zvinofanirwa kutorwa mupfungwa kuti mhando yechibvumirano ichi haigone kuchinjwa, saka kana changoiswa murejista chete kana iwe uchigona kukanzura kana mamiriro akaiswa anozvitendera. Kana iwo mazwi echibvumirano haachagadziriswe, sezvo sekutaura kwandakaita blockchain iri rekodhi risingakwanise kugadziriswa kana kuchinjwa chero nguva.
Iko kune cryptocurrency bubble?
Kunge chero imwe mhando yeasset, mari yemadhora inowirwa nemabhuru anowedzera mutengo wavo pamusoro peukoshi chaihwo. Muchiitiko che cryptocurrencies, kuona iro rinogona kuitika iri basa rakaomesesa kupfuura mamwe marudzi enhumbi kubvira zvinoita zvisingaite kuona kukosha kwechokwadi kwechimwe chinhu secherechedzo seyinogona kuve cryptocurrency. Iko kukosha kweEther kunogadziriswa nemutemo wekupa uye kudiwa, vanhu vazhinji pavanotenga maEthers, ndipo paunonyanya kukwira mutengo uye zvinopesana, izvo zvinogona kukonzera kuti mutengo wazvino uratidzwe zvakanyanya nevano fungidzira vanotenga nekutengesa macrypto mari kufunga chete fungidzira pamutengo wayo. Chinhu chakanakira Ether pamusoro peBitcoin ndechekuti huwandu hwayo hahuganhurwe kune mamirioni makumi maviri nemasere asi kuti mamirioni gumi nemasere ether anoburitswa gore rega rega izvo zvinobatsira kudzora inflation mune kukosha.
Kunyangwe zvakadaro, zvakaoma kuziva kana tiri kunyatsotarisana nefuro kana kwete, nekuti dzimwe nyanzvi dzinozvifunga mumakore mashanu kusvika gumi mutengo weEther unogona kunge wakakwira zvakapetwa ka5 pane iripo iyezvino izvo zvaizoratidza kuti ichiri nerwendo rwekumusoro kumusoro.
Kana Ethereum akakugutsikana uye iwe uchida kuve chikamu cheiyi cryptocurrency, pano unogona kutenga maEthers. Iwe hausati wakurudzira here tenga Ethereum?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Technology » Ethereum Chii uye sei kutenga maEthers?
Ethereum! Mari yakadii, kune kwandinofarira kune vakachengeteka kana nekumwe kuratidzwa kweiyo cryptocurrency ecosystem
Ndatotenga maETH angu 🙂
Francisco Villarreal Guijo akadaro
Ndiri kufarira kuisa mari muEthereum. Mari yakawanda zvakadii yekuisa mari uye ndingaite sei kuti ndiwane mari yacho?
Kwazisai F. Villarreal
Pindura kuna Francisco Villarreal Guijo
Ndiri kufarira kuisa mari muEthereum. Ndechipi chiri chidiki chemari yekutenga ethereum uye maitiro ekudzoreredza mari.
Google Assistant ikozvino inoratidza nziyo seShazam
NichePhone-S kadhi rakakura-kadhi Android foni